Kismaayo News » Rayad lagu xasuuqay Jilib
Rayad lagu xasuuqay Jilib
Kn: Diyaarado dagaal ayaa goor dhaw oo ku beegneyd abaarihii 1:00pm ee duhurnimo ee saacadda Geeska Afrika 2 gantaal ku dhuftay xero ku taalay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe taasi ooy ku noolaayeen qaxooti ka soo barakacay gobolada dalka.
Sida ilo lagu kalsoonyahay oo ka madaxbanaan garabyada is haya ay u xaqiijiyeen KismaayoNews, waxaa duqaynta ku dhintay 3 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 25 ruux oo qaarkood ay yihiin dhaawac liita.
Dadka gantaaladu haleeleen ayaa dhamaantood ah caruur iyo haween, waxayna ahaayeen dad masaakiina oo xeradani ay gabaad u ahayd kadib markii ay colaadaha iyo abaaruhu ka soo barokiciyeen deegaamadii ay ku noolaan jireen.
Lama oga cidda iska leh diyaarahada duqeyntan arxan darada ah gaystay, laakiin dadku waxay farta ku fiiqayaan wadamada Maraykanka, Faransiiska iyo Kenya.
Arinta micnaha samaynaysa ayaa ah inaan xeradan qoxootiga ka agdhaweyn wax xero ciidan ah iyo wax gabaad u ah xarakada Alshabaab, taasina ay u egtahay inay diyaaradahani si ula kac ah u bartilmaameedsadeen qoxootiga masaakiinta ah ee ku xaraysnaa xerada maanta lagu xasuuqay oo ku taala magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Tan kalee suuro galka ah ayaa waxay tahay inay dhici karto jiritaanka cid diyaaradahan dhulka ka hagaysay taasi oo si qaldan ugu hagtay goobta ay ku noolaayeen barakacayaashu.
Keydooniba ha ahaatee, jawiga magaalada ayaa ah hadda mid calowsan, waxaana cirka isku shareeray cabsida ay dadku ka qabaan in mar kale ay diyaaradu soo rogaal celiyaan oo gaystaan khasaare intaasi ka balaaran.
Kani waa khasaarihii ugu balaarnaa oo dad rayad ah ka soo gaara duqaymaha ay gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ka wadaan diyaaradaha wadamada Reer Galbeedka iyo kuwa Kenya.
Bil ka hor ayay ahayd markii haweenay iyo xoolo kadin ah ay ku dhinteen magaalada Qooqaani kadib markii ay gantaalo ku tuurtay diyaarad laga lahaa dalka Kenya.
Wixii war ah ee ka soo kordha kala soco KismaayoNews.com